भन्सार ऐन, २०६४ | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर भन्सार ऐन, २०६४
on: १८ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०९:०० अर्थान्तर
महानिर्देशक, भन्सार विभाग
विसं २०१७ मा पाल्पामा जन्मेका जगदीश रेग्मीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानून, अर्थशास्त्र, शिक्षासङ्कायमा स्नातक तथा व्यवस्थापन र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०४३ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका रेग्मीले शिक्षा, अर्थ, गृहलगायत मन्त्रालयमा काम गरिसकेका छन् । हाल उनी २०७४ कात्तिकदेखि भन्सार विभागको महानिर्देशक छन् ।
सुधारको दिशामा भन्सार प्रशासन
भन्सार प्रशासनले आफ्नो परम्परागत भूमिकालाई क्रमिक रूपमा परिवर्तन गर्दै व्यवस्थापनलाई अझ बढी दक्ष, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउँदै लगिरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, प्रविधिको विकास, राष्ट्रिय आवश्यकता, द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय प्रतिबद्धता, खुला तथा उदार अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ भएका परिवर्तनअनुरूप विभागले आफ्नो भूमिकालाई समसामयिक सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । साथै भन्सार विभागले सरकारको वित्तीय व्यवस्थामा सुधार गर्दै आन्तरिक स्रोत परिचालनद्वारा आर्थिक विकास प्राप्त गर्ने र व्यापार सहजीकरण गर्नेे महत्त्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि व्यापार सहजीकरणको महत्त्व र भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरणमा यसको सम्बन्धलाई आत्मसात गरेको छ । व्यापार सहजीकरणप्रतिको झुकाव मूलतः निकासी एवम् पैठारीसम्बन्धी कार्यप्रक्रियामा सुधार गर्ने, भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित र सरलीकरण गर्नेसँग सम्बद्ध छ । यी विषय मूलतः भन्सारका लागि भए पनि सीमा नाकामा रहेका अन्य नियामक निकायहरूका लागि समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । जोखीम व्यवस्थापनको अवलम्बन, परीक्षणमा आधारित नियन्त्रण, सूचनाप्रविधिको अधिकतम प्रयोग, सीमावर्ती भन्सार प्रशासन, अन्य प्रशासनिक एकाइ र निजीक्षेत्रसँग सहकार्य एवम् उपयुक्त अन्तरराष्ट्रिय मान्यताहरूको अवलम्बनजस्ता सिद्धान्तहरूले भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरणलाई समेटका छन् ।
भन्सारको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता प्राप्त गर्ने दृढसङ्कल्पका साथ भन्सार विभागले वर्षौंदेखि आफ्ना क्रियाकलाप, प्रक्रियाहरू, स्वचालन र सेवाग्राहीका सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै आएको छ, जुन पूर्णतया समकालीन अन्तरराष्ट्रिय अनुकरणीय अभ्याससँग सम्बन्धित छ । यो दृढता शृङ्खलाबद्ध आवधिक कार्ययोजनाको परिणामस्वरूप प्राप्त हुन आएको हो । भन्सार विभागले प्रत्येक ४ वर्षको अवधिमा आधुनिकीकरण प्रयासका रणनीति, क्रियाकपाल र कार्यहरूको सूची नै तयार गरेको छ । सन् २००३ देखि यस्तो गर्न शुरू गरिएको हो ।
भन्सार विभागले चौथो चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति एवम् कार्य योजना (२०१३–२०१७) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभागको तत्कालीन र मध्यकालीन भावी सुधारका लागि महŒवपूर्ण प्रतिवेदनका रूपमा रहेको यो योजनाले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूको अवलम्बन र अन्तरराष्ट्रिय उत्तम अभ्यासहरू जस्तै विश्वव्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता, संशोधित क्योटो महासन्धि, विश्व भन्सार सङ्गठनको सेफ फ्रेमवर्क, जोखीम व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भन्सार विभागको दूरदृष्टि, लक्ष्य र मूल्यमान्यताको सेरोफेरोमा तर्जुमा गरिएको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीति एवम् कार्ययोजना २०१७–२१ मा सरकारी एवम् निजीक्षेत्रका सरोकारवालाहरूकोे विचारसमेत समावेश गरिएको छ । यस योजनाको कार्यान्वयनबाट मुलुकको आर्थिक दक्षता बढाउन निकासी प्रवर्द्धन गर्न दिने र व्यापार सहजीकरण गरी आर्थिक समृद्धिमा सुधार ल्याउन भन्सार विभागले सघाउ पुर्‍याउनेछ ।
भन्सार प्रशासनले प्रक्रियागत सरलीकरण, भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण, सदाचारिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, व्यावसायिकताजस्ता मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गरी वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) तथा इण्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) क्यामेराजस्ता प्रविधिमार्फत निगरानी, ब्रोकर तथा सेलेक्टिभिटी मोड्युलको कार्यान्वयन, जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवाग्राही सेवाकक्षको सञ्चालन गरी सेवाग्राहीका जिज्ञासाको समाधान, आसिकुडा वल्र्ड प्रणालीको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । साथै निकासी पैठारीका लागि निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर (एक्जिम कोड) लागू गरी अनलाइनबाटै यस्तो सङ्केत नम्बर प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । चौधओटा भन्सार कार्यालयमा आईपी क्यामरामार्फत विभागबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भन्सार प्रशासनले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू मूलतः व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने, व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्ने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधार तयार गर्ने तथा उचित राजस्व सङ्कलनका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेतर्फ निर्देशित रहेका छन् । वैदेशिक व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्दै अर्थ व्यवस्थालाई गतिशील बनाउन तथा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी निजीक्षेत्रको विकासमा योगदान गर्न व्यावसायिक वातावरणको निर्माण गर्ने दिशामा भन्सार विभाग केन्द्रित रहेको छ ।
यद्यपि वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गरी कानूनको स्वैच्छिक परिपालनाको विकास गर्नु, चोरी, निकासी, पैठारी तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नु, भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाई कानूनको परिपालना गराउनु, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको विकास गर्नु, अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भन्सारसम्बन्धी कानून र प्रक्रियाहरूको अन्तरमिलान गर्नु, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरहरूलाई समायोजन गर्दै जानु, सहजीकरण र नियन्त्रणका बीच सन्तुलन कायम गर्र्नु चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
नेपालको भन्सार प्रशासनलाई भइरहेका सुधार तथा विद्यमान भन्सार नीति तथा कानून र प्रविधिको प्रयोगले सरकारका साथै निजीक्षेत्रको समेत उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारीको अपेक्षा गरेको छ । वस्तुको वर्गीकरण, विवरण तथा महशुलको स्वयम् घोषणा र पेश गर्ने व्यवस्थाले समग्र सुधारका लागि व्यवसायी तथा निजीक्षेत्रसमेत थप जिम्मेवार, नैतिकवान् र उत्तरदायी हुनुपर्छ । यसो हुन सके मात्र भन्सार प्रशासनले लिएको नीति तथा सुधारको सही कार्यान्वयन भई व्यवसायको समय र लागत कम गर्न सकिने र स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
न्यून बीजकीकरण र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि
पूर्वनिर्देशक, भन्सार विभाग
भन्सार ऐन, २०६४ का सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू केके देख्नुभएको छ ?
भन्सार ऐन, २०६४ मा कुनै नकारात्मक पक्ष छैनन् । भन्सार ऐन, २०१९ लाई विस्थापन गरी नयाँ ऐनका रूपमा आएको यो ऐन व्यापार एवम् प्रविधिमैत्री छ ।
नेपालको भन्सार ऐन र अन्तरराष्ट्रिय जगत्को भन्सार ऐनमा केकस्ता फरक पाउनुभएको छ ?
नेपालको भन्सार ऐन अन्तरराष्ट्रियस्तरकै रहेको छ । तर, भन्सार ऐनमा हुनुपर्ने कतिपय विषय आर्थिक ऐन एवम् भन्सार नियमावलीमा समेत छरिएर रहेको देखिन्छ । अन्य देशको तुलनामा यो ऐन केही छोटो पनि रहेको छ ।
ऐन बनिसकेपछि नेपाल सरकारले भन्सारसँग सम्बन्धित विभिन्न सम्झौता गरेको छ भन्ने सुनिएको छ ? त्यसबारे केही बताइदिनुहुन्छ कि ?
भन्सार ऐन, २०६४ पछि नेपालले भन्सारसँग सम्बन्धित विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता (टीएफए) र विश्व भन्सार सङ्गठनको संशोधित क्योटो महासन्धि (आरकेसी) मा हस्ताक्षर गरेको छ ।
नेपालले गरेको सम्झौताअनुरूपका प्रावधान भन्सार ऐनमा समेटिएका छन् त ?
भन्सार ऐन, २०६४ व्यापारमैत्री एवम् प्रविधिमैत्री हँुदाहुँदै पनि यसमा पछिल्ला सम्झौताहरूमा उल्लिखित कतिपय विषय समावेश हुन सकेका छैनन् । ती विषय नेपालले विश्लेषण गरी सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र भन्सार ऐनमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
भन्सारमा न्यून बीजकीकरण हुन्छ भनिन्छ, यो कसरी हुन्छ र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
भन्सार मूल्याङ्कनमा निम्न तरीका अपनाई न्यून बीजकीकरण गरेको देखिन्छ :
विदेशमा जति मूल्यमा मालवस्तु किनेको हो, विक्रेतासँग मिलेमतो गरी सोभन्दा कम मूल्यको बीजक बनाई वा नक्कली बीजक बनाई भन्सारमा पेश गर्ने गरिन्छ ।
मालवस्तु किनेको ठाँउदेखि नेपालको भन्सार विन्दुसम्म लागेको वास्तविक भाडा बीमालगायत परल खर्चमध्ये कतिपय खर्च उल्लेख नै नगर्ने र गरे पनि कम उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।
मालवस्तुको गुणस्तर नै फरक पारी बीजक बनाउने पनि गरिन्छ ।
न्यून बीजकीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा हालको दण्डात्मक व्यवस्था यस्तो रहेको छ :
कम गरेको मूल्यमा थप गरी मूल्य बढाई फरक पारेको मूल्यको ५० प्रतिशत थप महशुल लिने वा
भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्यमा ५ प्रतिशत थप गरी भन्सारले खरीद गर्ने ।
यीमध्ये पहिलो व्यवस्थाको प्रयोग अधिक छ । यसबाट न्यून बीजकीकरण प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण हुन सकेको छैन । त्यसै गरी दोस्रो व्यवस्था प्रयोग गर्दा मालवस्तु खरीद गरेपछि लीलामको समस्या छ ।
त्यसैले न्यून बीजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न केही थप उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ, जस्तै :
न्यून बीजकीकरण गरेको देखिएमा भन्सारले व्यापारिक जालसाजीमै कारबाही गरी मालवस्तु जफत गर्ने र त्यस्तो व्यक्तिलाई आयात व्यापार गर्न आवधिक निलम्बन वा प्रतिबन्ध लगाउने ।
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई मूल्य अभिवृद्धि कर बीजकलाई व्यवहारमै अनिवार्य गर्ने । यसका लागि राजस्व चुहावटको नियन्त्रण एवम् अनुगमन गर्ने निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले सक्रिय भई अभियानकै रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने ।
आम नागरिकले बजारमा मालवस्तु खरीद गरेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक अनिवार्य रूपमा माग गर्ने, त्यस्तो बीजक नदिनेसँग मालवस्तु खरीद नगर्ने र त्यस्ता व्यापारीको सूचना तुरुन्त आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिने ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले यस प्रकारका गुनासा सुन्ने र तुरुन्त कारबाही गर्ने हट लाइन एवम् एक्शन युनिटको व्यवस्था गर्ने ।
निष्कर्षमा के भन्नुहुन्छ ?
नेपालले हस्ताक्षर गरेका सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानहरू र भन्सार ऐनका प्रावधानहरूमा केकति फरक देखिन्छन् सोको विश्लेषण गरी भन्सार ऐन परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । यो परिमार्जन गर्दा नेपालले सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने अवधिभित्र गरे पुग्छ ।
भन्सार ऐनलाई प्रत्येक वर्ष जारी हुने आर्थिक ऐनबाट संशोधन गर्ने र ती संशोधन प्रत्येक वर्ष पुनः ल्याउने गरिएको छ । जुन राम्रो अभ्यास होइन । यस्ता संशोधनलाई भन्सार विधेयकको माध्यमबाटै संशोधन गर्ने र एकपटक गरिसकेको संशोधनलाई पुनः ल्याइरहनुपर्ने गर्नु हुँदैन । आर्थिक ऐन र भन्सार नियमावलीमा भएका कतिपय प्रावधान भन्सार ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । तिनको अध्ययन गरी भन्सार ऐनमै समावेश गर्नुपर्छ । न्यून बीजकीकरण नियन्त्रण गर्न माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नागरिकको सहयोग र प्रशासनिक सक्रियता एवम् प्रतिबद्धताको खाँचो छ, कानूनको अभाव छैन । भन्सार प्रशासनको दक्षता र प्रभावकारिता बढाई भन्सार प्रक्रियालाई जति बढी प्रविधिमैत्री बनाउन सक्यो त्यति नै यस क्षेत्रमा हुनसक्ने विकृति एवम् विसङ्गतिहरू हटाउन सकिनेछ ।
स्वागतयोग्य एक्जिम कोड
उपाध्यक्ष, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घ
भन्सार ऐन, २०६४ मा केके कमजोरी देख्नुभएको छ ? यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
हवाईमार्गबाट हुने आयातमा यताबाट पठाएको पैसाबराबर मूल्यको पूरै सामान नआएसम्म भन्सारबाट छुटाउन पाइँदैन । उदाहरणका लागि हामीले १० हजार डलर पठायौं, उताबाट पहिलो खेपमा ५ हजार डलर मात्रैको समान पठायो र त्यसको १ महीनापछि अर्को ५ हजार डलरको सामान पठाउने जानकारी गरायो भने पनि दोस्रो खेपको सामान नआउँदासम्म पहिलो खेपको सामान छुटाउन पाइँदैन । कि त बाँकी पैसा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । तर, समुद्री मार्गबाट हुने आयातमा जति मूल्यका सामान आयो त्यत्ति छुटाउन पाइन्छ । एउटै मुलुकमा हुने आयातमा यस्तो दोहोरो प्रावधान राख्दा व्यवसायीले अनावश्यक लागत र झन्झट बेहोर्नु परेको छ । तैपनि ऐनमा समयसमयमा सुधारचाहिँ भइरहेकै छ ।
भन्सार ऐनका सकारात्मक पक्षहरू पनि त होलान नि ?
तेस्रो मुलुकसँग आयात वा निकासी आयातनिर्यात कोड (एक्जिम कोड) लिएकाले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको भन्सार ऐनमा छ । यसलाई हामीले अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । हाम्रो सङ्घले त आयातनिर्यात कोड चाहिन्छ भनेर पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो । यसले वास्तविक व्यापारीले मात्र कारोबार गर्न पाउने अवस्था सृजना गरेकाले आज बजारमा आउने दुई–चार खेप कारोबार गरेर भाग्नेलाई नियन्त्रण गर्छ । यसो हुँदा सरकारी राजस्व गुम्ने डर कम हुन्छ र उपभोक्ताले पनि आफूले विश्वास गरेका व्यवसायीसँग कारोबार गर्न पाउँछन् । गुणस्तरीय वस्तु आपूर्तिमा पनि यसले सहयोग गर्छ ।
भन्सार ऐनका कुनकुन विषय तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ ?
निकासी–पैठारी कोडको व्यवस्था लागू भएसँगै नेपालमा बसेर आयातनिर्यात कारोबार गरिरहेका छिमेकी मुलुक भारतका नागरिकलाई आफूले वर्षौंदेखि गरिरहेका काम गर्न गाह्रो भएको छ । यसलाई सम्बोधन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । किनकि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सृजना गर्न र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन उनीहरूको पनि योगदान रहेको छ ।
व्यापारीले पैसाको प्रलोभनमा पारेर सामानमा न्यून बीजकीकरण गर्छन् भनिन्छ, यस विषयमा तपाईंको भनाइ के छ ?
न्यून बीजकीकरण भएको छैन म भन्दिनँ । यस विषयमा कुरा गर्दा यसको कारणसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । एउटा त सन्दर्भ मूल्यको कुरा छ । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने विश्वव्यापी प्रचलनलाई छाडेर हाम्रो देशमा सन्दर्भ मूल्यका आधारमा वस्तुको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी छ । यति गतिशील समयमा एउटै वस्तुको मूल्य त घण्टाघण्टामा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, निर्यातकर्ताले व्यवसायीपिच्छे फरक मूल्यमा सामान विक्री गर्न सक्छ भने उस्तै वस्तुको मूल्य, जसलाई हामी सन्दर्भ मूल्य भन्छौं, को आधारमा भन्सार महशुल र अन्य कर असुल्ने परिपाटी यहाँ छ । कारोबार मूल्य एउटा हुन्छ, सन्दर्भ मूल्य अर्कै हुन्छ । अनि त न्यून बीजकीकरण नगर्दा पनि गरेजस्तो देखिइहाल्छ ।
अर्को कुरा न्यून बीजकीकरण रोक्न शङ्का लागेको वस्तु सरकारले नै खरीद गरिदिन सक्ने कानूनी व्यवस्था पनि छ । केही पटक सरकारले सामान किनिदिने हो भने न्यून बीजकीकरण स्वतः हराएर जान्छ ।
सामान ल्याउँदा भन्सारमा पर्ने समस्या केके देख्नु भएको छ ?
१. भन्सार कार्यालयहरूमा पूर्वाधारको कमी छ । जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो । हामी समयको गतिअनुसार जान सकेका छैनौं । भन्सार क्षेत्रमा गएर हेर्ने हो भने पारिपट्टि कत्ति व्यवस्थित देखिन्छ, हाम्रोपट्टि केही पूर्वाधार छैन । यसले एकातिर छिटोछरितो जाँचपासमा झन्झट उत्पन्न गरेको छ भने अर्कोतिर व्यापारको लागत बढाइरहेको छ ।
२. भन्सार कार्यालयहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । भन्सारसँग सम्बन्धित कर्मचारीभन्दा गैरकर्मचारी हाबी छन् ।
३. नक्कली सामानको बेरोकटोक प्रयोगले सक्कली सामानको कारोबार प्रभावित भएको छ । यसले उपभोक्ता मारमा परेका छन् । तर, सरकारले त्यसलाई रोक्ने इच्छाशक्ति देखाउन सकेको छैन । नक्कली अर्थात् ग्रे प्रडक्ट रोक्ने ऐनकानूनको पनि कमी छ । बेलैमा यसलाई रोक्ने आवश्यक ऐनकानून निर्माण गरेर नक्कली सामानको आयात र विक्रीवितरण नरोक्ने हो भने सक्कली सामानको कारोबार प्रभावित हुने निश्चित छ ।
भन्सार शुल्क नेपालमा राजस्वको मुख्य स्रोत हो । यस्तो महत्त्वर्ण क्षेत्र भन्सारलाई आधुनिकीकरण गरेर व्यापारमा सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । हाम्रा कागजी प्रक्रिया निकै झन्झटिला छन्, तिनलाई सरल बनाउनुपर्छ । भन्सार वर्गीकरण (एचएस कोड)लाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलनअनुसार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।
भन्सार एजेण्ट र समस्या
विष्णुमणि खनाल, महासचिव, भन्सार एजेण्ट
महासङ्घ नेपाल तथा अध्यक्ष नेपाल भन्सार एजेण्ट सङ्घ काठमाडौं
भन्सार ऐन, २०१९ र भन्सार नियमावली २०२६ देखि भन्सार एजेण्टसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । तर, २०५३ सालमा एजेण्टहरूको आवश्यकता महसूस गरी इजाजतपत्र दिइयो । २०५४ सालदेखि २०५६ सालसम्म आउँदा ४ सय ९० व्यक्तिले भन्सार एजेण्टको इजाजतपत्र लिएका लिए । हाल यी एजेण्टले काम नपाउने अवस्था आएको छ र उनीहरूले विविध समस्या भोगेका छन् । फलस्वरूप धेरैले यो पेशा छोडी अन्य व्यवसायमा लागेका छन् । अहिले १ सय ८८ जना मात्र भन्सार एजेण्ट यस काममा संलग्न छन् ।
भन्सार एजेण्टहरूले २०५३ देखि नै हस्तलिखित प्रज्ञापनपत्रहरू भरी सामान जाँच पास गर्न सहयोग गर्दथे । त्यो क्रम धेरै वर्षसम्म चल्यो । त्यसपछि भन्सार विभागले हस्तलिखितका साथै कम्प्युटरमा पनि प्रज्ञापन पत्र राख्ने व्यवस्था लागू गर्‍यो । सन् १९९६ देखि भने पूरै आसिकुडा तरीकाबाट प्रज्ञापन निकाली सामान जाँचपास हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । कम्प्युटर मुद्रित प्रज्ञापन पत्रबाट काम गर्ने क्रम सन् २००९ सम्म चल्यो । त्यसपछि नेपालभरिका विभिन्न भन्सार कार्यालयमा आसिकुडा प्लस प्रणाली लागू भयो । २०१६ बाट आसिकोडाको विकसित रूप वेबमा आधारित आसिकुडा वल्र्डको थालनी मेची भन्सार कार्यालयबाट शुरू भयो । हाल मुख्य भन्सार कार्यालयमा आसिकुडा वण्र्ड लागू भई भन्सार जाँचपास भइरहेको छ । पूरै आसिकुडा प्रलाणी पूर्णरूपमा लागू भएमा कुनै पनि उद्योगी, व्यापारी तथा भन्सार एजेण्टले आफ्नो कार्यालयमा बसी राज्यले तोकेको भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत सम्पूर्ण कर इण्टरनेट बैङ्किङका माध्यमबाट भुक्तानी गरी आधुनिक भन्सार प्रणलीको सुविधा लिन पाउने थिए । यसो भयो भने मात्र सरल तरीकाले राजस्व असुली हुने थियो ।
यसरी भन्सार विभागले तोकेको तथा विभिन्न प्रणाली लागू गरेको अवस्थामा भन्सार एजेण्टहरूले राजस्व असुलीमा गरेको योगदानको मूल्याङ्क त हुने नै छ । तर पनि भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५५, ५६ र ५९ ले गर्दा भन्सार एजेण्टहरूले कुनै मानवीय त्रुटिवश प्रज्ञापनमा प्रविष्ट गरेको जानकारी गलत भएको खण्डमा पनि भन्सार एजेण्ट इजाजतपत्र नै धरापमा पर्ने अवस्था छ । उक्त दफाहरूलाई समयसापेक्ष हुने गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगी व्यापारीले उपलब्ध गराएको जाँचपास प्रक्रियामा चाहिने कागजातको आधारमा भन्सार एजेण्टहरूले प्रज्ञापनपत्रमा प्रविष्टि गरी प्रज्ञापनपत्र उत्पादन गर्ने हो । त्यहाँ उल्लेख भएका विषयबाहेक अन्य विषय उल्लेख भएमा मात्र भन्सार एजेण्टलाई कारबाही हुनुपर्ने हो । कुनै पनि उद्योगी व्यापारीले दिएको कागजपत्रको आधारमा सोही कुरा उल्लेख गरी सामान जाँचपास भएको खण्डमा कुनै पनि एजेण्टलाई कारबाही हुनु गलत हो ।
प्रज्ञापनपत्र उत्पादन गरिसकेपछि सामान जाँचपास गर्ने प्रक्रियामा भन्सार कार्यालयले उक्त प्रज्ञापनको सम्पूर्ण सामान हेर्ने, खोल्ने, जाँच्ने प्रक्रियामा कर्मचारी खटाएको हुन्छ । सोही कर्मचारीको आदेशमा उक्त सामान खोलिन्छ । प्रज्ञापनमा घोषणा उल्लेख भएअनुसार सामानको विवरण मेल खाएमा मात्र सामान जाँचपास हुने हो । प्रज्ञापनपत्र भर्दा भन्सार एजेण्टले उक्त सामान हेर्न पाएका हुँदैनन् । यसमा उद्योगी तथा व्यापारीले दिएको कागजातको मात्र आधारमा प्रज्ञापनपत्र भर्ने हुन्छ । तसर्थ सामान देखाएको समयमा फरक परेको खण्डमा भन्सार एजेण्टहरूलाई कुनै जरीवाना वा कारबाही हुनु हुँदैन । भन्सार ऐन, २०६४ मा भने चारित्रिक गुण फरक परेमा, मूल्य फरक परेमा अथवा उत्पादन गरेको मुलुक फरक परेमा वा नापतौल फरक परेमा सम्बन्धित व्यापारी र भन्सार एजेण्टलाई पनि जरीवाना गर्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधान अनुचित छ ।
पहिले स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली लागू नहुँदा सामान आयात वा निर्यात गर्दा कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्नु पर्दथ्यो । तर, अहिले विभिन्न भन्सार नाकामा स्वचालित कम्प्युटर प्रणाली लागू भइसकेपछि सामान छुटाउँदा चाहिने सम्पूर्ण आवश्यक कागजात कम्प्युटर सिष्टममा अपलोड गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीसँग सम्पर्क हुँदैन ।
भन्सार भनेको सधैं सहजीकरण गर्ने संस्था हो । राजस्व असुलीमा भन्सार कार्यालयको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । यसलाई अझ परिष्कृत र सहजीकरणको बाटोमा डोर्‍याउन आसिकुडा वर्ल्ड पूर्णरूपमा लागू हुनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा छिटोछरितो प्रणाली शुरू भई उद्योगीव्यपारीले आफ्ना सामान आयात तथा निर्यात गरी राज्यलाई समृद्ध बनाउन अझ बढी सक्षम हुने थिए ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल